Dokambarotra indiàna nanasongadina ankohonana iray miozolmàna Hindo, nesorina taorian’ny valibontan’ny elatra havanana · Global Voices teny Malagasy
Nalefan'ireo Indiàna mpivady samihafa finoana tety anaty tambajotra ny traikefany
Voadika ny 15 Novambra 2020 9:47 GMT
Pikantsary avy amin'ny dokambarotra TV iray nesorin'ilay marika firavaka Tanishq, nanasongadina vehivavy hindo iray miaraka amin'ny rafozambaviny miozolmàna.
Taorian'ny valibontana mivaivay nahazo azy tety anaty media sôsialy, notsoahan'ny marika firavaka indiàna iray ny dokambarotra TV nampiseho fianakaviana misy finoana roa, hindo sy miozolmàna.
Asehon'ilay dokambarotry ny Tanishq navoakany tamin'ny 9 Oktôbra ny vehivavy iray hindo mitafy sari sy firavaka, notarihan'ny rafozambaviny miozolmàna hamonjy fety nentindrazana hindo fanao amin'ny fampandroana zazamena.
Hoy ilay vinantovavy tamin'ilay rafozambaviny: “Nefa ireo fombafomba ireo tsy atao akory any amin'ny fianakavianao (miozolmàna),” izay novaliany hoe “fomba fanaon'ny fianakaviana tsirairay ny manao izay hahasambatra ny zanaka vavy.”
Ho an'ireo Indiàna mpikatroka avy amin'ny elatra havanana dia dokambarotra mampiroborobo ny ” jihad-mpitiavana” io, teorian'ny tsikombakomba iampangana ireo lehilahy miozolmàna ho manao izay fomba hamadihana ireo vehivavy hindo hanaraka ny finoana misy azy ao anatin'ny fanambadiana.
Tao anatin'ny andro roa nandefasana azy, nanomboka lasa fironana tao amin'ny Twitter ny #BoycottTanishq.
Andiany Jihad-mpitiavana novokarin'ny Tanishq
— Manoj Kureel (@ManojKureel7) 14 Oktôbra 2020
Ry Hindo malala,
Notondroina an-kolaka ho mpampihorohoro ianareo!
Amin'ity indray mitoraka ity dia tena matotra aho miteny mba hanaovana ankivy Tanishq #BoycottTanishq pic.twitter.com/XmX4a8My5h
— Rishi (@RishiUvaach) 14 Oktôbra 2020
Tamin'ny voalohany, valiny nasetrin'ny Tanishq ny famaliana ireo fanehoankevitra tao amin'ny pejy Facebook sy ireo fantsona YouTube -ndry zareo. Taty aoriana, notsoahany tanteraka tsy ho eny anatin'ireo pejy media sôsialin-dry zareo ilay dokambarotra no sady nandefa taratasy fialantsiny izy. Nohamafisin'ny Tanishq fa ny tanjon'ilay dokambarotra dia ny hampiroborobo ny tsy fizarazaràna, fa tsy ho fihantsiana toepo miiba akory.
Ireo vondrona mpifikitra amin'ny nentindrazana koa nikarakara hetsipanoherana teny ivelan'ireo toerana fivarotana firavaky ny Tanishq tany amin'ireo tanandehibe indiàna vitsivitsy. Tany Indore, notakian-dry zareo ny hametahan'ireo toerana fivarotana ilay taratasy fialantsiny eny amin'ny varavarankeliny.
Voakiana ihany koa ny Tanishq noho ny nanatsoahany ilay dokambarotra, nampangaina ho nilefitra noho ny tsindry nataon'ny elatra havanana ao India. Nilaza ilay marika fa ireo toepo nateraky ny nataon-dry zareo no tsy maintsy nojereny, ary koa ny fitoniana ho an'ireo mpiasa any amin'ireo fivarotan-dry zareo.
Ny Lalàna Manokana tamin'ny 1954 ho an'ny Fanambadiana ao India dia manome zo an'ireo olompirenena indiàna haka vady izay tiany, tsy ijerena izay saranga na finoana niaviana. Azo ampiharina any amin'ny fanjakana rehetra io, afa-tsy ny ao Jammu sy Kashmir.
Na eo aza ny tantara lavabe momba ny fifanambadian'ny samihafa finoana ao India, tsy lanin'ny vavonin'ireo mbola mpifikitra amin'ny nentindrazana ao anaty fiarahamonina ao ny firaisana tahaka ireny.
Mazàna no iharan'ny filam-baniny ireo mpivady avy amin'ny finoana tsy mitovy. Miaraka amin'ny fitomboan'ny tsy fifandeferana ara-pinoana eo ambanin'izao fitondrana ankehitriny izao, mitombo ny fanararaotana — ary matetika no maka toerana ety anaty tambajotra.
Hafatra tafahoatra ny 40.000 tao amin'ny Twitter no azon'ny vehivavy miozolmàna iray nanambady hafa finona aminy, nalefany ho fanohanana ilay dokambarotry ny Tanishq.
Na nisy aza ny fandrahonana, marobe ireo Indiàna miaina anaty ankohonana mpivady tsy mitovy finoana niaviana no nisafidy hizara ny traikefan-dry zareo tety anaty tambajotra. Rasika Agashe, mpilalao no sady tale izay nanambady ilay miozolmàna iray mpilalao ao Bollywood, dia nandefa sary iray ahitàna ny fampandroana zaza hindo natao an-janany:
Ny fampandroana an-janako….fa tena tsy maintsy nozaraiko ity..ary alohan'ny hitatatatàna jihad-mpitiavana, ndao isika mba hianatra momba ny lalàna manokana momba ny fanambadiana.
Ireo indiana mpitarika manana ny toerany koa niteny ho fanohanana ilay marika. Ilay efa minisi-panjakana tany aloha sady sekretera jeneraly lefitra tao amin'ny Firenena Mikambana, Shashi Tharoor, nibitsika hoe:
Dia niantso fanaovana ankivy ny @TanishqJewelry izany ireo Hindutva tery saina noho ny fanasongadinana ny firaisan'ny Hindo sy ny miozolmàna tao anatin'ity dokambarotra mahafinaritra ity. Raha tena manafintohina fatratra azy ireo ny “ekatvam” hindo-miozolmàna, maninona ry zareo raha manao ankivy ilay maripamantarana isan'ny tranainy indrindra amin'ny firaisan'ny hindo sy ny miozolmàna manerana ny tany— India?
Nozarain'i Karuna Nandy, mpisolovava, ny lahatsoratra iray nosoratan'i Sameena Dalwai, profesora iray ao amin'ny Sekoly indiàna fianarana lalàna “Jindal Global Law School”, izay milaza fa ny mpikatroka avy amin'ny elatra havanana tahaka ireny dia tsy hoe fotsiny mpankahala miozolmàna fa koa mpakahala vehivavy.
Milaza ny tantarany ny Prof mpampianatra lalàna, toy ny hoe ilay zaza tsy teraka tao amin'ilay dokambarotry ny Tanishq: “Miezaka mafy ry zareo hanome antsika izao tontolo izao…fianakaviana mifangaro sy namana hafa. Kanefa, tsy vitan-dry zareo akory ny miaro antsika amin'ny korontana, ny habibiana ary ny faharefoana. Saingy soa isika lavo nahazoantsika hery. “
–Karuna Nundy (@karunanundy) 15 Oktôbra 2020
Na ho faty tsy ho ela aza ireo hatezerana momba ilay dokambarotra, dia mbola ohatra velona iray hafa io amin'ireo fitsaratsaram-poana ara-pinoana tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny firenena.
11 ora izayIndia